အစားအစာများကိုရငျးနှီးဆုံရပ်မတိုင်မီစွန့်ပစ်ရပါမည်အဘယ်အရာ မှစ. | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
လူတ၏နှလုံးကိုမှလမ်းသည်သူ၏အစာအိမ်မှတဆင့်ဖြစ်ပါသည်, က overdo ဖို့မကြိုးစားကြည့်ပါ။ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ပုရငျးနှီးဆုံရပ်ကိုလုယူနိုင်သောထုတ်ကုန်ရှိပါတယ်။
Sonorous ပူဖောင်းနှင့်ဝမ်းဗိုက်ကြွက်တက်, သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဖွဲ့စည်းခြင်း, လေချဉ်တက်ခြင်း - လက္ခဏာတွေထိုကဲ့သို့သောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ အတိအကျမခေါ်နေသည်။ ထိုကွောငျ့, တစ်ဦးရင်ခုန်စရာညဥ့်စီစဉ်သည့်အခါမိတ်ဖက်ထုတ်ကုန်အောက်ပါသင့်ရဲ့အစားအစာနှင့်ပြဋ္ဌာန်းချက်များအနေဖြင့်ဖယ်ထုတ်။
ချိုမြိန်အသီးအပွ - လိင်စဉ်အတွင်းလေစေ
ပန်းသီး, လိမ္မော်, စပျစ်သီး, ငှက်ပျောသီး, နေ့လည်စာသို့မဟုတ်ညစာပြီးနောက်အချိုပွဲအတွက်သစ်တော်သီး, သငျသညျလိင်ရှိသည်သွားနေလျှင်, fit ပါဘူး။ အထူးသဖြင့်ချိုမြိန်သစ်သီးများသည်, အူထဲမှာလေနှင့်နာကျင်မှုဖြစ်စေတဲ့, ရှေ့မှာစားအတူ digesting ။
ငါကအစာခြေဓာတ်ငွေ့သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်ထဲကလာမယ့်အသံကိုနားထောငျဖို့ချမ်းသာများ၏ယခုအချိန်တွင်အတော်လေးရာအရပျထဲကကြောင်းသဘောတူသည်။ ထိုမှတပါး, bloating သည့်အခါပေါ်လာရသော colic, ယေဘုယျအားဖြင့်အတှေ့အကွုံလိင်၏အပျြောအပါးရောက်စွက်ဖက်။
ငန်အစားအစာများ - စိုက်ထူနှင့်အတူပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်?
ဒါဟာတူသောလတ်ဆတ်တဲ့အစားအစာအနည်းငယ်လူတွေနားလည်သည်။ ကျနော်တို့သုပ်, ငါးနှင့်အသားဟင်းလျာများအတွက်ဆားရက်ရက်ရောရောလောင်းနေကြသည်။ စတိုးဆိုင်တူညီတဲ့အပြစ်တရား၏လက်မှကုန်ပစ္စည်းများ။ စင်အသက်သည်ဝက်အူချောင်းထည့်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ်အစိုဓာတ်ကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်ရှည်မှထုတ်လုပ်သူ, ဆားအများကြီးသောက်သည်။
အားရစရာချစ်မြတ်နိုးတဲ့ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာတစ်ခုရငျးနှီးတှေ့ဆုံမတိုင်မီအကြံပြုသည်မဟုတ်။ ငန်အစားအစာများကိုအသွေးထောက်ပံ့ရေး၏နှောင့်အယှက်မှဦးဆောင်သောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရည်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်။ ဤသည်၌ဦးနှောက်ကိုအောက်ဆီဂျင်အစားအစာပိုဆိုးလာရင်, ကအလွယ်တကူရောက်ရှိဖို့တစ်ဦးလျှော့နိုင်စွမ်းကိုဆိုလိုသည်။
အရက် - နှင့်အတူလိင်ရှိသည်ဖို့အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်လား?
အရက်စိတ်ဓါတ်များပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်ပြည်တွင်းရေးအတားအဆီးသက်သာပေမယ့်၎င်း၏အသုံးပြုမှုမှရှောင်ကြဉ်။ တကယ်, စပျစ်ရည်ကိုတောင်တစ်ဖန်။ အရက်၏အကျိုးသက်ရောက်ခဏဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ဤအချိန်ကာလအတွင်းခန္ဓာကိုယ်တစ်အိပ်စက်ခြင်းဟော်မုန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အချိန်ရှိပါတယ် က melatonin.
အလွန်အကျွံသောက်သုံးပြီးနောက်သင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လျင်မြန်စွာအိပ်ပျော်ဖို့အလိုဆန္ဒမခံစားရဘူး။ နောက်ထပ် program ကိုသင်ချိန်မှရပါလိမ့်မယ်။ လူတို့သညျတှငျ, အရက်ကိုမကြာခဏအာနိသင်တစ်ခုအားနည်းခြင်းများဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဖြည့်စွက်ရန်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သင်ပင်ပျော့ကျယမကာထံမှလိင်ရှောင်ကြဉ်ရန်ခံစားချက် enchanting အပေါ်သတ်မှတ်ထားနေတယ်ဆိုရင်။
အဆိုပါဂေါ်ဖီထုပ်မိသားစုများ၏စက်ရုံမဆိုကြင်နာ - ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း, ပန်းဂေါ်ဖီ, ဘရပ်ဆဲလ် - ဓာတ်ငွေ့မီးစက်၌သင်တို့၏အစာအိမ်ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။ အူအတွင်းမီသိန်း၏စုဆောင်းခြင်းသူရငျးနှီးများ၏အလိုဆန္ဒကိုသတ်လိမ့်မယ်, အလွန်မနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ ဂေါ်ဖီထုပ်၏အဘယ်သူမျှမဟင်းလျာများမလုပ်ဆောင်နိုင်လျှင်အနည်းဆုံး 40 မိနစ်ကုသမှုအပူမှအောက်, နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ကချက်ပြုတ်။
အဆိုပါပေါ်လာ၏အသုံးပြုမှုအများဆုံး inopportune ယခုအချိန်တွင် belching ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ သင်က sexy င်ထင်ပါသလား? နေ့လည်စာသို့မဟုတ်ညစာဓာတ်ငွေ့မပါဘဲဓာတ်သတ္တုရေကိုသောက်လော့။
လုပ်သူများ - ဖြည့်ညှင်းအတွက်ကောင်းပါတယ်
Немного чая или чашечка ကော်ဖီ по завершению романтического ужина не повредит. Но избыточное количество кофеина повысит уровень cortisol, စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများတွင်ခန္ဓာကိုယ်ကနေထုတ်လုပ်တာဟော်မုန်း။ အစွန်းအပေါ်ဖြစ်ခြင်း, သင်လိင်နှိုးဆွနှင့်ပိုပြီးဦးနှောက်အာရုံကြော, အပန်းဖြေလို့မရပါဘူး။ သင်လိုအပ်သနည်း
မတ်ေတာ၏လှပသောအချိန်လေးများအတွက်ပြင်ဆင်မှုအတွက်, သင့်တဲ့အစားအစာအကြောင်းကိုဂရုတစိုက်စဉ်းစားပါ။ low-ဆီဥ, အနည်းငယ် peppery ကြက်ဟင်းလျာများ, ငါးလိင်၏ခေတ်မီကျွမ်းကျင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံး option ကို -, ကြက်ဥ, crayfish, ပုစွန်, ကမာအလျင်အမြန်စေလွှတ်။